မောင်တောတွင်ငွေကျပ် ၈၀၀၀၀၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိရွှေချောင်းများနှင့်ရွှေများဖမ်းဆီးရမိ – feedsarticle
မောင်တောတွင်ငွေကျပ် ၈၀၀၀၀၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိရွှေချောင်းများနှင့်ရွှေများဖမ်းဆီးရမိ
September 27, 2021 September 27, 2021 - by Morm Sophorn - LeaveaComment
နိရာ⁇⁇ရာ၊ စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၂၁
ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောမြို့နယ်တွင်ငွေကျပ် ၈၀၀၀၀၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိရွှေချောင်းများနှင့်ရွှေများကိုယမန်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။
မောင်တောမြို့နယ် Jahar Morin (ခ) Myoma Kintan ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သူအသက် ၃၂ ​​နှစ်အရွယ် Mamarikrik၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှ Ma Mauk Junit, ၂၁ နှစ်နှင့် Anwar Sadat တို့နှစ် ဦး သည်မောင်တောမြို့နယ်အောင်ဇေယျာရွာအနီးမောင်တော-တောင်ကြီးကားလမ်းပေါ်တွင်ယမန်နေ့ညနေ ၅ နာရီခန့်ကမောင်းလာခဲ့သည်။
သူတို့စီးလာတဲ့ယာဉ်ကိုနယ်ခြားစောင့်လုံခြုံရေးတွေကစစ်ဆေးတယ်။ ရွှေလက်ဝတ်ရတနာအမျိုးမျိုးအတွက် ၂၈ ကျပ်၊ Rakhine Daily News ၏အဆိုအရ ၁၈ ကျပ်နှုန်း (လက်ရှိတန်ဖိုးငွေကျပ် ၈၁၉,၂၈၀,၀၀၀) နှင့်မြန်မာငွေကျပ်သိန်း ၅၀ တို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။
ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီးအဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကိုထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်နဲ့ငွေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပို့ကုန် / သွင်းကုန်ဥပဒေပုဒ်မ ၈ အရအမှုနှစ်ခုလုံးကိုဒဏ်ငွေဆောင်ရွက်သည်။
သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင်မောင်တောရှိ ၃ မိုင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်၌ငွေကျပ်သိန်း ၆၀၀၀ ကျော်နှင့်ငွေသားသိန်း ၂၀၀၀ တန်ဖိုးရှိရွှေချောင်း ၃၉ တုံးကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။
နိရာ⁇ာ၊ စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၂၁
သူတို့စီးလာတဲ့ယာဉ်ကိုနယ်ခြားစောင့်လုံခြုံရေးတွေကစစ်ဆေးတယ်။ ရွှေလက်ဝတ်ရတနာအမျိုးမျိုးအတွက် ၂၈ ကျပ်၊ ရခိုင်နေ့စဉ်သတင်းအရရွှေပီဇာ ၁၈ ကျပ်တန် ၄ လုံး (လက်ရှိတန်ဖိုး ၈၁၉,၂၈၀,၀၀၀) နှင့်မြန်မာငွေသိန်း ၅၀ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်ဟု Rakhine Daily News တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Previous Article Hot News! The army does not want….
Next Article The vi.ctim from Pakokku said that she was repe.atedly threa.tened and ra.ped aga.inst her will
About Morm Sophorn
View all posts by Morm Sophorn →